विनोद चौधरीको वाईवाईमा लगानी शंकाको घेरामा
काठमाडौं, कुनै पनि एक नेपाली विश्वको धनाढ्यको सूचीमा देखिनु गौरवको कुरा हो । विनोद चौधरीको व्यापार व्यवसाय धेरै देखिए पनि उनको वाईवाई चाउचाउको प्रगति उल्लेख्य मान्न सकिन्छ । उनी युरोपदेखि अफ्रिकासम्म वाईवाईको व्यापार विस्तारको लागि लागिपरेका छन् । एक नेपालीले विदेशमा पैसा लगेर व्यापार व्यवसाय गर्न सरकारको अनुमति लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यसमा भने हामी सजक हुनु आवश्यक छ । विनोद चौधरीले भैंसेपाटीबाट वाईवाई थालनी गरे । उनी अहिले सिक्किम हुँदै भारतका विभिन्न स्थानमा कम्पनी खोलेर भुटान हँुदै युरोप तथा अफ्रिकातिर लाग्दैछन् । उनले ती देशहरुमा लगानी गर्न कसरी पैसा लगे ? त्यो जानकारी कसैलाई पनि छैन । कसैले चासो पनि राखेका छैनन् । नेपाली पैसा विदेशमा लैजान चौधरीलाई राष्ट्र बैंकले कसरी अनुमति दिइरहेको छ, राष्ट्र बैंक नै अलमलमा देखिन्छ । चौधरी नेपाली हुन् भने नेपालबाटै पैसा लगेर व्यवसाय गरेको हुनुपर्छ । यदि उनी विदेशी भइसकेको हो भने हामी नेपाली भनेर गौरव गर्न आवश्यक पनि छैन । र, उनको नेपालमा रहेको व्यापार व्यवसाय एक विदेशीले गरेअनुसारको हुनुपर्छ ।
नेपालमा प्रायः सबै निकायका व्यक्तिहरु पैसामा बिक्ने गरेको विविध घटनाक्रमले प्रष्ट हुन्छ । चौधरी ग्रुपले पनि सुरुको सेटिङको भरमा नै सबै कामकुराहरु गरायो । कुनैबेला समस्या पर्ने डरले अहिले चौधरी गु्रपले योजनाबद्ध रुपले काम गरिरहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी अहिले नेपाली होइनन् । उनी एनआरएन हुन् । तर उनका छोरा निर्वाण चौधरीलाई भने उनले नेपालको जिम्मा दिएका छन् । बाबु विदेशी छोरो नेपाली भएर काम गरिरहेका छन् । यसो हुँदा उनलाई विदेशमा लगानी गर्न पनि सजिलो भएको छ भने नेपालमा लगानी गर्न पनि सजिलो भएको छ । तर विनोद चौधरीले नेपाली नागरिकता त्यागे कि त्यागेनन् ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । उनले नेपाल आउँदा विदेशीको रुपमा काम गरिरहेका छन् या धनाढ्य एक नेपालीले जसरी हुकुम चलाइरहेका छन् । वा नियम कार्यान्वगन गर्ने निकायका व्यक्तिहरु नै चौधरीको चाकडी गरिरहेका छन् ? यो शंकाको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
चौधरी गु्रपको भावी योजना ः
चौधरी ग्रुपले युरोप र अफ्रिकामा व्यापार विस्तारको तयारी सुरु गरिसकेको छ । सर्वियाबाट उत्पादन सुरु हुनै लागेको छ, यसपछि तयारी चाउचाउ खाने संस्कृति नबसेको युरोपमा पनि फरक संस्कृतिको जग बस्ने विश्वास ग्रुपले गरेको छ । वाईवाई विस्तारमा फरकखालको रणनीति छ । जब कुनै ठाउँमा वाईवाई उत्पादन सुरु हुन्छ, प्रत्येक पाँच सय किलोमिटरमा उसका नयाँ नयाँ फ्याक्ट्री थपिँदै जान्छन् । नेपाल र भारतमा वाईवाई यसरी नै फैलिँदै छ । युरोपमा पनि तयारी चाउचाउको संस्कृति चाँडै बन्ने, वाईवाईको विस्तारै यही लयमा हुने विश्वास चौधरी गु्रपले लिएको छ । त्यसैगरी साउदी अरेबियामा वाईवाई प्लान्ट लगाउन सुरु भएको छ । डिसेम्बरदेखि साउदीबाट पनि वाईवाईको उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य छ । थाइल्यान्डबाट वाईवाई तीन दशकअघि (२०४१) नेपाल भित्रिएको हो । नेपालमा मात्र हैन, भारतीय बजारमा पनि वाईवाईको बजार द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको छ । एकपछि अर्को प्लान्ट स्थापना गर्ने क्रम चलिरहेको छ । भुटानमा पनि छिट्टै उत्पादन सुरु हुँदैछ । मध्यपूर्व, युरोप, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकामा प्लान्ट खोलेर वाईवाईलाई संसारभर फैलाउने अभियान छ ।
अहिले नेपाल र भारतबाट वाईवाई उत्पादन हुन्छ । वार्षिक दुई अर्ब ५० करोड प्याकेट वाईवाई बजारमा आउँछ । यो चाउचाउ विश्वका ३० भन्दा बढी मुलुकमा पुग्छ । वाईवाईको विश्व चाउचाउ बजारमा २.५ प्रतिशत हिस्सा पुगिसकेको छ । नेपालमा ५१ प्रतिशत र भारतमा २७ प्रतिशत हिस्सा छ । आगामी चार वर्षभित्र विश्वमा वाईवाईको हिस्सा पाँच प्रतिशत पु¥याउने योजना छ ।
यसका लागि भिजन २०२० अगाडि सारिएको छ । चार वर्षभित्र दशवटा मुलुकमा वाईवाई उत्पादन सुरु हुनेछ । वार्षिक पाँच अर्ब प्याकेट वाईवाई उत्पादन हुनेछ । अर्को ‘भर्जिन मार्केट’ हो, अफ्रिका । अफ्रिकन मुलुकमा चाउचाउको ठूलो बजार सम्भावना रहेको ग्रुपले दखेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा चाउचाउ प्लेयर छन् । उत्तरी र पूर्वी अफ्रिकामा अझै प्लेयर छैनन्, बजार पनि ठूलो छ । अफ्रिका प्रवेशका लागि इजिप्ट र केन्यामा रोजाइमा छन् । इजिप्टमा एक्जिस्टिङ कम्पनीसँग सहकार्य गरेर इनअर्गानिक ग्रोथ गर्न खोजिएको छ । केन्यामा प्लान्ट लगाएर पूर्वी अफ्रिकी मुलुकमा वाईवाई पु¥याउने योजना छ । अमेरिकी मुलुकमा वाईवाई पु¥याउन दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा प्लान्ट लगाउन खोजिएको छ । मेक्सिको पहिलो रोजाइमा छ । यहाँ प्लान्ट लगाएर उत्तर अमेरिकासम्म वाईवाई निर्यात गर्न सकिन्छ । पेरुमा अर्को प्लान्ट लगाउँदा दक्षिणी अमेरिकी मुलुक समेट्न सकिन्छ । यसका लागि साझेदार खोजी भइरहेको निर्वाणले सुनाए । पोल्यान्ड, रुस, इरान, टर्कीमा पनि काम अगाडि बढिरहेको छ । जनमञ्च साप्ताहिकबाट